Musangano we Kimberley Process Unotanga muKinshasa ku DRC
Musangano weKimberley Process, KP, wekukurukura nyaya dzanetsa dzemangoda ekwa Marange nezvimwe zvinetswa mu KP watanga neMuvhuro muKinshasa ku Democratic Republic of Congo, DRC.
Asi masangano akazvimirira aramwa kupinda musangano uyu achiti haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya ye imbabwe ne KP, zvikuru zviri kuitwa nasachigaro veKP, Va Mathieu Yamba, vekuDRC, avo vakapa Zimbabwe mvumo yekutengesa mangoda ekwaChiadzwa zvisina kuwiriranwa mumusangano uyu.
Gurukota rezvemigodhi, VaObert Mpofu, vari kutungamira nhumwa dzeZimbabwe kumusangano uyu.
Mumwe wenhumwa idzi, Va Goodison Nguni veFederation of Non-Governmental Organisations in Zimbabwe, sangano rinodyidzana nehurumende, vanoti vacharwisa zvakasimba kuitira kuti Zimbabwe isarambidzwa kutengesa mangoda ekwaMarange pamisika yepasi rose zvisina ongororo.
Imwe nhengo ye Africa Partnership Canada, Va Allan Martin, vanoti masangano akazvimirira ari kushushikana nekutadza kwe KP kuwirirana kumisa mangoda eZimbabwe kuitira kuti asatengeswa pasi rose kusvika zvese zvinodiwa neKP zvaitwa.
Chipangamazano musangano re Crisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kwe Africa, Va Dewa Mavhinga, vanoti havaoni chinobuda chine musoro kumusangano uri kuitirwa kuDRC.